အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းမြင့်သူတွေတောင် ရှုပ်ထွေးစေတဲ့ သံတူကြောင်းကွဲ...
Home | ဘလော့ခ် | အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းမြင့်သူတွေတောင် ရှုပ်ထွေးစေတဲ့ သံတူကြောင်းကွဲ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ (၇) လုံး
အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းမြင့်သူတွေတောင် ရှုပ်ထွေးစေတဲ့ သံတူကြောင်းကွဲ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ (၇) လုံး
Feb 21, 2018 &VerticalLine;
တခါတရံ အင်္ဂလိပ်စကားဟာ ပရိယာယ်များတဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တချို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆင်တူသလိုဖြစ်ပေမဲ့ တော်တော်လေးကွဲပြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေလည်း ထွက်နေတတ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို သံတူကြောင်းကွဲစကားလုံးတွေလို့ခေါ်ပြီး၊ ၎င်းတို့ဟာ အမြဲရောထွေးနိုင်တဲ့ စကားလုံးတွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြထားတာတွေကတော့ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းမြင့်သူတွေနဲ့ မူရင်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောသူတွေကြားထဲမှာတောင်မှ ရှုပ်ထွေးတတ်တဲ့ သံတူကြောင်းကွဲစကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Adverse – Averse
ဒီစကားလုံးနှစ်ခုစလုံးဟာ ထိခိုက်နာကျင်စေသော၊ မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်သောလို့ အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအသုံးတွေထဲမှာ ထူးခြားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုလည်း ရှိပါတယ်။ Averse ကို လူတွေအတွက်ရည်ညွှန်း တဲ့နေရာမှာ သုံးပြီး adverse ကိုတော့ အများအားဖြင့် အရာဝတ္ထုတွေ၊ လုပ်ရပ်တွေကို ဖေါ်ပြတဲ့နေရာမှာ သုံးပါတယ်။
E.g.: In adverse weather condition, he is averse to going out. (ဆိုးရွားလှတဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေထဲမှာ သူဟာ အပြင်ထွက်ရတာကို မကြိုက်လှပါ။)
၁။ Altar – Alter
Altar က နာမ်ဖြစ်ပြီး လူတွေက ဘာသာရေးဓလေ့အရ ရှိခိုးဦးခိုက်မှုလုပ်တဲ့ စားပွဲ၊ ပလ္လင်ကိုခေါ်တဲ့အခါ သုံးတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စကားမှာ သူမကို “လက်ထပ်ပါ” (marry her) ဆိုတဲ့စကားအစား “lead her to the altar” လို့ ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Alter ကတော့ ကြိယာဖြစ်ပြီး တစ်စုံတစ်ခုကို ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။
E.g.: Father, do we need to alter this ancient altar? (အဖေရေ ဒီရှေးဟောင်းပလ္လင်ကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်ပြောင်းဖို့ လိုမလား။)
၁။ Appraise – Apprise
သိတဲ့အတိုင်းပဲ rise နဲ့ raise တို့ဟာ တူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ appraise နဲ့ apprise တို့ကတော့ လုံးဝကိုပဲ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ကြိယာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Appraise (ချီးကျူးခြင်း) ဆိုတာက တစုံတခုရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့အရည်အသွေးကို ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ တစုံတဦးကို (apprise) အကြောင်းကြားတယ်ဆိုရင်တော့ အရေးကြီးတဲ့သတင်းအချက်အလက်တချို့ကို အသိပေးတာပါ။
E.g.: I thought it was right to apprise Chris of what had happened. He should appraise this case. (Chris ကို ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ အသိပေးတာ မှန်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ သူဟာ ဒီကိစ္စကို ချီးကျူးသင့်ပါတယ်။)
၁။ Canvas – Canvass
“s” ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့တင် သင်ဟာ အဓိပ္ပာယ်ကို လုံးဝပြောင်းလဲပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ Canvas (ကင်းဗတ်စ) ဆိုတာကတော့ မာကျောကြမ်းတမ်းတဲ့အထည်စဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့်ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်တွေမှာ အသုံးပြုမှု ပိုများပြားလာနေပါတယ်။ တဖက်မှာတော့ canvass ဆိုတာ ကြိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး မဲဆန္ဒရှင်တွေဆီကနေ ထောက်ခံမှုရအောင် မဲဆွယ်စည်းရုံးတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
E.g.: If you want to canvass successfully in the next meeting, please leave those boring canvas shoes at home. (သင့်အနေနဲ့ လာမယ့်အစည်းအဝေးမှာ အောင်မြင်စွာ မဲဆွယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြု၍ ဒီငြီးငွေ့ စရာကင်းဗတ်ဖိနပ်တွေကို အိမ်မှာပဲ ထားခဲ့ပါ။)
၁။ Coarse – Course
Course ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ ရေပန်းစားတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ ဒီနာမ်စကားလုံးကို အခြားနာမဝိသေသနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ coarse နဲ့ စာလုံးပေါင်းမှားနိုင်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာဘဲ ဒီစကားလုံးတွေဟာ အသံထွက်တောင်မှ ဆင်တူနေပါတယ်။ Coarse ကတော့ မာကျောကြမ်းတမ်းခြင်းလို့ ဆိုလိုပါတယ်။
E.g.: Don’t eat that main course! The meat is coarse like grass! (အဓိကဟင်းပွဲကို မစားပါနဲ့။ အသားဟင်းက မာကျောကြမ်းတမ်းလိုက်တာ မြက်လိုပါပဲ။)
၁။ Complement – Compliment
ဒီ ကြိယာနှစ်ခုကတော့ သရတစ်လုံးပဲ ကွဲပြားပေမဲ့ ခွဲခြားပြောဖို့ အလွန်ခက်ခဲလှပါတယ်။ Complement ဆိုတာက နာမ်လည်းဖြစ်သလို၊ ကြိယာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံအောင် တခုခုကို ထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို compliment လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို ချီးကျူးတာ၊ အားကျတာကို ဖေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
E.g.: He complimented Erika on her style, because she always knows what complements her outfit elegantly. (သူဟာ Erika ကို သူမစတိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူမဟာ သူမရဲ့ အဝတ်အစားကို ကျက်သရေရှိစေအောင် ဘယ်အရာက ထပ်ဖြည့်ထားသလဲဆိုတာကို အမြဲသိလို့ဖြစ်ပါတယ်။)
၁။ Envelop – Envelope
Envelope ဆိုတာ နာမ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းရဲ့ ဆက်နွယ်ရာကြိယာကတော့ to envelop ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းနည်းရောထွေးစရာစကားလုံးတွေပါ။ စာအိတ် (envelope) ဆိုတာကတော့ စာရွက်ထည့်ထားတဲ့အိတ်ဖြစ်ပြီး စာ(သို့မဟုတ်)အခြားစာရွက်စာတန်းတွေကို ခေါက်ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ “to envelop- ဖုံးအုပ်သည်၊ လွှမ်းခြုံသည်” ဆိုတာကတော့ စာအိတ်ကိုသုံးပြီး စာကို ဖုံးအုပ်လိုက်တာ (သို့မဟုတ်) စာကိုခေါက်သိမ်းပြီးထည့်လိုက်တာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
E.g.: You should use an envelope to envelop your document first. (ခင်ဗျားရဲ့စာရွက်စာတမ်းကို အရင်ဆုံး ခေါက်သိမ်းထည့်ဖို့ စာအိတ်တစ်အိတ်ကို သုံးသင့်တယ်။)